Waa Maxay Instagrammable Meelaha intooda badan The In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Waa Maxay Instagrammable Meelaha intooda badan The In Europe
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 11/12/2020)
Ku safrid tareen noqon kartaa mid ka mid ah hababka ugu fiican in ogaado dal cusub - nasto ee qaadee, daawashada ah muuqaal rogo on by. Waxa kale oo ay tahay habka ugu wanaagsan ee ay u gaaraan meelaha ugu Instagrammable in Europe!
Marka ay timaado in ay u safraan, aad phone runtii waa meel walba aad tahay – ka qaadashada sawiro iyo videos in la fara badan filtarrada iyo qoraalka ciyaaro. Diiwaangelintu waxay safarka aad, aad fasax, waa hab fiican oo in la qabto aad xusuus cajiib ah magaalooyinka, dalalka, iyo marinkaaga jidka meelaha. Ma aha oo kaliya waxaad badbaadin kartaa xasuus kuwaas oo fiiriyaa dib iyaga on mustaqbalka, laakiin waxa kale oo aad isticmaali kartaa Instagram in daqiiqado kuwan la wadaag saaxiibadaada.
laakiin, halkaas oo ay yihiin meelaha ugu Instagrammable in Europe? In erayada aan dhiman ee Cady iyo haadbiyoodda iyo ka Gabdhaha celceliska, marka ay timaado in tirada fursadaha Instagrammable, xadka kajirin.
The meelaha ugu Instagrammable in Europe: The Venice Simplon-Orient-Express: London - Venice
Waxaan ku dhinteen laba shimbirrood oo leh hal dhagax halkan. Tani ma aha oo kaliya mid ka mid ah ugu adeegyada tareenka caan dunida oo dhan, laakiin sidoo kale waa meelaha ugu Instagrammable in Europe. Inkastoo ay jiraan a khadadka kala duwan yar oo aad qaadi karto, ugu caansan waa London in safarka Venice. Marka aad heysato aad tareenka si ay u Venice, iyadoo la kaashanayo Save A tareenka, fursadaha aad tahay dhammaadka lahayn!
London si Tareenadu Lille
Lyon in Tareenada London
London si Tareenadu Bordeaux
The Rialto Bridge is one of only four bridges crossing the Venetian Grand Canal, taas oo macnaheedu yahay inay aad u adag tahay in sawir aan dadka ku dul. Mid ka mid ah doorasho - sida goobaha oo dhan - waa in aad soo booqato oo aad u aroor hore.
Waxaan shaki qof ka baxo magaalada oo aan sawir ka mid ah Canal Grand ah. Waa waxa ay ka dhigeysaa Venice, si fiican u, Venice! Mid ka mid ah aragtida ugu wanaagsan waxaa ka mid ah waxa ugu sareeya ee Rialto Bridge ka.
The meelaha ugu Instagrammable in Europe:Bernina Express: Switzerland - Italy
U kala safarka CHUR in Switzerland iyo Tirano in Italy, safarka 122km aad qaadataa dhex Swiss hanqadhka Alps. Fiican ee Instagram!
Zurich si Tareenadu CHUR
Geneva in Tareenadu CHUR
Milan in ay Tareenadu Tirano
Bergamo in Tareenadu Tirano
Marka aad soo gaaray Switzerland, halkan waa meelaha ugu Instagrammable:
Buurta TOBLERONE THE
buurtan ma u egtahay yaqaan? Haddii aad weligaa cunin bar Toblerone a, in ay u badan tahay sababta! Waa ku buurta taasi waxay kujirtaa baakada waana sababta ay ugujirto liiskayaga Meelaha ugu badan ee Instagrammable ee Yurub.
Si aad u hesho kubad isku hoos, tareenka Gornergrat ka Zermatt jidka oo dhan si ay hogaanka, ka dibna kor u socdaan in ay dhibic ugu jirnaa (ee la soo dhaafay hoteelka).
tip: dukaamada ee Zermatt inta badan ay maamulaan ka mid ah baararka Toblerone for this shot saxda ah! Sidaas darteed haddii aad rabto in aad shot this oo aadan rabin inaad qaadato fursadda aad markaas hubi in aad ka iibsan ka hor inta aad hesho si aad Zermatt.
Haddii aad halkan u quudhin tahay (i.e.. paragliding) ka dibna aan shaki ku jirin inaad la xigtay doonaa qaar ka mid ah tallaalada Tacaddi Instagram. Ha dareemin sida anigoo goor dhiig karkaaga? Waxaad ka heli kartaa shot qabow sare ee Harder Kulm ka. Waxaad heli doontaa view cajiib badan magaalada Interlaken iyo Alps Swiss ah.
The meelaha ugu Instagrammable in Europe: Brocken Railway The. Harz Mountain Range, Germany
On wadadan gaar ah, aad fuuli doonaa Brocken 1,142m-sare, peak ugu sareeya ee waqooyiga Germany, riyaaqayaa views dusha of muuqaalka dhirta ku xeeran. laakiin, aadan u leeyihiin in ay kaliya sida inaad buur koreyso in ay booqdaan Mountains Harz ah. Dhab ahaan, waxaa dhaanta haddii aad rabto magaalooyinka toy la ekayd Daar wayn, Goobaha Heritage World UNESCO, qalcado iyo Biyac laga bilaabo da'da dhexe ama wax tusa xayawaanka duurjoogta ah ee ay Habitat dabiiciga ah. Fiican ee Instagram aad feed!
Leipzig in Tareenadu Wernigerode Brocken
Hanover in Tareenadu Wernigerode Brocken
Munich in ay Tareenadu Wernigerode Brocken
Berlin si Tareenadu Wernigerode Brocken
Booqo Collegiate Church, Castle, iyo Old Town ee Quedlinburg
Iyada oo isku dhafan ee Villas Grunderzeit iyo Art lacagta badan, Town ee Old ah Quedlinburg waxaa mid ka mid ah meelaha ugu Instagrammable in Europe ka dhigaysa. Waa tirada iyo tayada sare ee dhismaha alwaax-duniyooyinka in ka dhaadhiciyay UNESCO sheego Quedlinburg tusaale gaar ah ee magaalada Dr Makumbe Yurub.
Leipzig in Tareenadu Quedlinburg
Hanover in Tareenadu Quedlinburg
Munich in ay Tareenadu Quedlinburg
Berlin si Tareenadu Quedlinburg
Highland Line West The: Scotland
Safrida weheliyaan Highland Line West ah, Tareenka ee Steam Jacobite waxaa laga yaabaa in ugu wanaagsan ee loo yaqaan for kaalinta uu ka ciyaara ee movies Harry Potter - sida Hogwarts Express. Tareenka ayaa ka waddaa stretch 84-mile u kala Fort William ka Mallaig on Railway Line West Highland ah. Waxaa inta badan lagu tilmaamo mid ka mid ah u socdaalay weyn tareenka ee dunida, iyo kasbatay si!
Hayso eegno qaar ka mid ah xiisaha aad laga yaabaa inuu naftaada xigtay!
The meelaha ugu instagrammable in Europe: Yellow tareenka, France
Waxaad dhahdaa 'Haa’ in safar this! Waayo, qarnigii ka badan, this meter-eeg tareen huruud ah ayaa loogu fuuli jiray ay jidka marayo Pyrenees Faransiis ka Villefranche-de-Conflent in Latour-de-Carol. Waa maxay waxa ka maqan ee masaafada - waa dheer saacadood oo kaliya 63km oo ku saabsan saddex - waa in ka badan ilaa dhigaysa in views gebi Instagrammable. Buuraha weyn ee Parc des Naturel Regional Pyrenees Catalanes isagoo mid ka mid ah!
Waxa kale oo ay istaago saldhiga ugu sareeya tareenka France ee, Bolquere-Eyne. Waa kuwee fadhiya 1592m sareeya heerka biyaha badda, iyo gudbo Gisclard Pont ah, buundada ganaax tareenka a.
Marseilles in Tareenadu Toulouse
Eedayn telefoonka iyo cusboonaysiiso app Instagram. Waa wakhti ay ku ballansan tigidh iyadoo la kaashanayo Save ATrain iyo hesho xigtay!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-instagrammable-spots-europe%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)